एनसेलले ल्यायो अनलिमिटेड डेटा र आकर्षक अल नेट भ्वाइस, एसएमएस बन्डल प्याकहरु
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले मनसुन धमाका अफर ल्याएको छ। जसअन्तर्गत एनसेलका ग्राहकहरुले आकर्षक अनलिमिटेड डेटा प्याकका साथै भ्वाइस र एसएमएस बन्डल गरिएको अल नेट प्याकबाट फाइदा लिन सक्छन्। यी प्याकहरु आज बिहीबार (जेठ १९) बाट सञ्चालनमा रहनेछन्। ग्राहकका दैनिक डेटाको आवश्यकताको सहज रुपमा सम्बोधन गर्न यस अफर अन्तर्गत एक दिन समयावधि...
एनसेलद्वारा पुल्चोक क्याम्पसका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छात्रवृति र सम्मान प्रदान
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसको पाँच संकायमा अध्ययन गरिरहेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई बुधबार एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान २०७८ प्रदान गरेको छ । छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान एनसेलको मुख्य कार्यालय...
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले स्थानिय चुनावलाई ध्यानमा राख्दै आकर्षक बोनस डेटा अफर ल्याएको छ। यस अफरमा ग्राहकले एनसेल एपमार्फत आफ्नो ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दा बोनसस्वरुप ५० एमबीदेखि ५०० एमबी डेटा प्राप्त गर्न सक्दछन्। यो अफर वैशाख २३ गतेबाट लागू भइसकेको छ। जसअन्तर्गत एपबाट एनसेल एपबाट ब्यालेन्स रिचार्ज गर्ने प्रत्येक...
एनसेलले ल्यायो एसईई विद्यार्थीका लागि ‘पहिलो सिम’ योजना, सोसल मिडिया प्रयोग गर्न ४ जीबी डेटा
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २०७९ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीहरुका लागि विषेश अफर ‘पहिलो सिम’ ल्याएको छ। यो योजनामा एसईईका विद्यार्थीले प्रिपेड सिमको खरिदमा सोसल मिडिया प्रयोग गर्नक लागि ४ जीबी डेटाका साथै रिचार्जमा बोनसलगायतका विभिन्न फाइदा लिन सक्छन्। यो योजना शुक्रबार वैशाख १६ देखि...
एनसेलले ल्यायो इन्डलेस कम्बो प्याकहरु, सुलभ दरमै जुनसुकै नेटवर्कमा सहजै सम्पर्क
काठमाण्डौ । नयाँ वर्ष २०७९ को अवसरमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई अझै सुलभदरमा सञ्चार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गराउँदै आकर्षक भ्वाइस र डेटा सेवा बन्डलिङ रहेको इन्डलेस कम्बो प्याकहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो योजना वैशाख ५ बाट सञ्चालनमा आएको छ। यो योजनाअन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले करसहित मात्र रु. २५ मा बिहान ५ बजेदेखि...
एनसेलले ल्यायो नयाँ वर्षमा नयाँ आकर्षक अफरहरु, यस्ता छन् सुविधाहरु
काठमाण्डौ । यो नयाँ वर्ष एनसेलका ग्राहकका लागि निकै नै विषेश हुने भएको छ। नयाँ वर्ष २०७९ को शुभ अवसरमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक न्यु इयर कम्बो अफर र रिचार्ज योजना ल्याएको छ। यी अफरहरु आज आइतबार (चैत्र २७) बाट सञ्चालनमा आएका छन्। यस आकर्षक न्यु इयर कम्बो प्याकअन्तर्गत ग्राहकले ७ दिन र २८ दिन समयसीमा रहेका विभिन्न...
नयाँ वर्षमा एफएनसीसीआई र एनसेलको सहकार्यमा दरबारमार्ग महोत्सव हुने
काठमाण्डौ। नेपाली नयाँ वर्ष २०७९ का अवसरमा काठमाण्डौमा सडक महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। कोभिड–१९ ले थलिएको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानका लागि सहकार्यः ‘स्थानीय उत्पादन तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्वद्धन’ भन्ने मूल नारासहित काठमाण्डौको दरबारमार्गमा १५ औँ दरबारमार्ग महोत्सव २०७९ आयोजना हुन लागेको हो।...
एनसेल ‘टेलिकम कम्पनी अफ द इयर’ र ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसिएटिभ अफ द इयर’ बाट सम्मानित
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेड ‘एसियन टेलिकम अवार्ड २०२२’को ‘टेलिकम कम्पनी अफ द इयर’ र ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसिएटिभ अफ द इयर’ विधामा सम्मानित भएको छ। कम्पनीले गरेका उल्लेखनीय काम र इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर स्थापनाको सम्मानस्वरूप यी पुरस्कार प्रदान गरिएका हुन्। सिंगापुरमा अवस्थित ‘एसियन मोबाइल न्युज’ले सन् २००३ देखि...
एनसेलले ल्यायो मोबाइल डेटा सबैभन्दा सस्तो बनाउँदै नयाँ गज्जबको दैनिक जीबी प्याकहरु
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले फागु पूर्णिमाका अवसरमा मोबाइल डेटा सबैभन्दा सस्तो बनाउँदै गज्जबको दैनिक जीबी प्याक अन्तर्गत नयाँ डेटा प्याकहरु ल्याएको छ। यसका साथै कम्पनीले दैनिक जीबी डेटा प्याकअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका प्याकहरुमा पनि भोल्युम बढाएको छ। ग्राहकले अब कर सहित मात्र रु १२९ मा ७ जीबी अल टाइम डेटा प्याकको फाइदा लिँदै...
एनसेलद्वारा विविध सुविधासहित लैनचौर मैदानको पुनर्निर्माण सम्पन्न
काठमाण्डौ। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत काठमाण्डौको मुटुमा अवस्थित लैनचौर मैदानको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ। विभिन्न सुविधासहित पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नतिपश्चात हालै काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २६ लाई एक समारोहबीच हस्तान्तरण गरिएको यो मैदान आमनागरिकका लागि खुला...
एनसेलले ल्यायो ‘अल नेपाल भ्वाइस प्याक’ अफर, सबै नेटवर्कमा सुपथ मूल्यमै कुराकानी
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकले अब नेपालका जुनसुकै नेटवर्कमा अझै सस्तो भ्वाइस कल दरमा कल गर्न सक्छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आकर्षक ‘अल नेपाल भ्वाइस प्याक’ अफर संचालनमा ल्याएको छ। यो अफरअन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले अब ५१ पैसा प्रतिमिनेटमा भ्वाइस सेवाको फाइदा लिन सक्छन्। यस अफरमा विभिन्न ६ वटा भ्वाइस प्याकहरु प्रिपेड ग्राहकका लागि...
एनसेलले ल्यायो नयाँ अल टाइम डेटा प्याक, बढ्यो ननस्टप युट्युब डेटा प्याकको भोलुम
काठमाण्डौ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सुलभ दरमा डेटा सेवामा पहुँच सुनिश्चित बनाउँदै आफ्ना ग्राहककालागि नयाँ अल टाइम डेटा प्याक ल्याएको छ। यसका साथै ननस्टप युट्युब अफरअन्तर्गतको एक अल टाइम डेटा प्याकको भोलुम उही शुल्कमा दोब्बर प्रदान गरेको छ। नयाँ अल टाइम डेटा प्याकमा ७ दिनको समयसिमा रहेको ५ जीबी अल टाइम डेटा ग्राहकले करसहित मात्र रु १२५...
एनसेलले ल्यायो गज्जबको डेली जीबी प्रयोगकर्ताका लागि क्यासब्याक अफर
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकले अब डेटा प्रयोग गर्दा आकर्षक क्यासब्याकको फाइदा लिन सक्छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले गज्जबको डेली जीबी प्याकअन्तर्गतका तीन विभिन्न प्याकहरुमा रु. २० देखि रु. ६० सम्मको क्यासब्याक अफर सञ्चालनमा ल्याएको छ। गजब्बको डेली जीबी प्याकअन्तर्गतको क्यासब्याक योजना सोमबार (फागुन ९) देखि लागू भएको छ। यस आकर्षक...
एनसेलले घटायो सबै लोकल कलको महशुल दर
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकहरुले अब अझै सस्तोमा नेपालभर एउटै कल दरमा भ्वाइस सेवाको लाभ लिन सक्छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो नेटवर्कभित्र तथा नेपालका अन्य कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने भ्वाइस कलको महशुल दर करबाहेक रु १.९९ प्रतिमिनेटबाट घटाएर करबाहेक प्रतिमिनेट रु १.६२ कायम गरेको छ। प्रिपेड...
एनसेलले ल्यायो ‘ननस्टप टाइम प्याक’, यस्ता छन् सेवासुविधा
काठमाण्डौ । एनसेलका ग्राहकहरुले अब आफ्नो मोबाइल डेटा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न समयसीमा भएका टाइम प्याकहरु लिन सक्छन्। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ‘ननस्टप टाइम प्याक’ ल्याएको छ। जसमा ग्राहकले छोटो समय अर्थात १५ मिनेट र २ घण्टाका लागि डेटा सेवा लिन सक्छन्। कम्पनीले पहिले नै वान आवर डेटा प्याक अर्थात १ घन्टा समयावधि भएको डेटा प्याक...